Ebe ị ga -enweta nlele emebe n'efu enweghị mmelite 2022
By Victoria Akpan TMLT January 31, 2022 si ebi ndụ 0 Comments
– Nlere anya emecha n'efu -
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya etemeete, ị maara na ọnụ ahịa ihe ịchọ mma nwere ike ịgbakwunye ngwa ngwa. Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ ụlọ ahịa na ụdị na-enye ndị ahịa ha ihe nlele etemeete n'efu.
Nke a bụ ụzọ dị mma iji nwalee ngwaahịa ọhụrụ na-enweghị itinye aka na mkpado ọnụahịa.
Ihe You Ga-achọ
Ụzọ kachasị mfe na kacha mma iji nweta ihe nlele n'efu bụ idegara ụlọ ọrụ akwụkwọ ozi ozugbo. Ọ dịghị mkpa imejupụta nyocha ma ọ bụ ajụjụ ndị na-adịghị mma, nke na-abụkarị ihe efu na ekwesịrị izere ya. Nke a bụ ntụle nzọụkwụ site na nzọụkwụ nke ihe ị ga-eme:
Mee ndepụta nke ụlọ ọrụ ndị ị nwere mmasị na ha.
Chọta adreesị ha (email ma ọ bụ nzipu ozi) na webụsaịtị ụlọ ọrụ.
Dee email / leta gị (anyị ga-atụle nke a n'okpuru).
Ziga ya ma chere ka akwụkwọ ozi bata!
Ebe nrụọrụ weebụ iji nweta ihe nlele emebere n'efu
Enwere ọtụtụ webụsaịtị ị ga-esi nweta ihe nlele emebere n'efu, n'okpuru, anyị depụtara 15 kacha mma.
Akara ịchọ mma ama ama n'ụwa, Sephora, maara otu ihe ma ọ bụ abụọ gbasara etemeete - ọ nwekwara obi ụtọ ịnye ihe atụ n'efu nke ọtụtụ ngwaahịa ya mara mma.
N'ịgbaso usoro ndebanye aha dị mfe na ngwa ngwa na saịtị ahụ, ndị òtù nwere ike ịhọrọ ihe ruru atọ free sample oge ọ bụla ha na-enye iwu online. Gaa na saịtị Sephora Ebe a.
Ihe nlele gụnyere r X Power Play Foundation, Prada Sugar Pop, ọtụtụ ngwaahịa nchacha ihu, yana ihe atụ na -esi ísì ụtọ n'efu.
2. L'Oreal USA
Nnukwu ịchọ mma, L'Oreal USA, na-enye ndị na-eme etemeete ohere isonye na ndị otu ndị ahịa. Mgbe ị debanyere aha n'ịntanetị ka ị bụrụ onye nrụpụta, a ga-akpọ ndị otu ahụ ka ha mee mmemme na saịtị ebe ha ga-anwale-ma debe-ngwaahịa ịchọ mma mara mma.
Ndị na -enweghị ike ịbịa n'onwe ha nwere nhọrọ nata nlele site na nzipu ozi.
Agbanyeghị na ndị otu anaghị ahọrọ ngwaahịa ndị ha nwalere, nke a dị mma maka ịnwale ntutu ọhụrụ na ngwaahịa etemeete n'ihu onye ọ bụla - na n'efu!
Gaa na saịtị L'Oreal USA Ebe a
3. Mpempe akwụkwọ
Onye bịara ọhụrụ, Smashbox, bụ maka ọtụtụ mmadụ, ịga maka ngwaahịa ịchọ mma mara mma na nke ọhụrụ. Saịtị a na -enye ọtụtụ nlele n'efu ma ọ bụ maka opekata mpe $ 1 na ịzụrụ ihe ọ bụla.
Nlereanya dị sitere na sachet nke moisturizer ruo n'uju nku anya zuru oke na akpa etemeete. Gaa na saịtị Smashbox Ebe a.
4. Nnwale ngwaahịa US
Nnwale Ngwaahịa USA na -akpọ ndị otu ọha ka ha debanye aha ka ha bụrụ ndị nyocha - yana idobe ihe ọ bụla ha nyochara. Agbanyeghị na ọ bụghị naanị saịtị etemeete, Nnwale Ngwaahịa USA na-enwekarị ihe ịchọ mma iji nyochaa.
Naanị ihe ị ga - eme bụ ịdenye aha na ntanetị, tinye nkọwa ole na ole gbasara ihe na-amasị gị na ihe ndị na-adịghị amasị gị yana, ngwaahịa ọhụrụ a ga-enyocha ga-abịakwute gị n'oge na-adịghị anya. jiri obiọma gaa na saịtị ha Ebe a
Akwụkwọ akụkọ ịntanetị na-ewu ewu, Redbook, na-akpọ ndị na-agụ akwụkwọ ka ha sonye na Club Red iji nweta ihe nlele efu maka nyocha yana ohere ịga mmemme pụrụ iche wee nweta ihe nrite.
Jiri obiọma gaa na saịtị ọrụ ha Ebe a.
Ozugbo ịbanye na saịtị ahụ, a ga -eduga gị na obere ajụjụ gbasara ọdịmma gị na ụdị ndụ gị. Mgbe ị dejupụtara fọm ahụ, pịa bọtịnụ nke na -ekwu 'Nweta m ihe efu' ma gbakwunye adreesị email gị, a ga -ezitere gị onyinye kwa ụbọchị.
Sytlecraze bụ ebe aga na-ekpuchi mma, ahụike na ịdịmma maka ụmụ nwanyị. Ọ na-enye ohere maka ndị ọrụ imeri ihe nlele etemeete na igbe mma. Ihe niile ị ga - eme bụ ijide ihe a na - enye ma nyochaa ngwaahịa na saịtị ahụ.
Mbụ, debanye aha na Nyocha Stylecraze wee jiri foto dejupụta profaịlụ gị. Ị nwere ike nweta isi ego ego site na ịgbakwunye ibe profaịlụ nke gị. Jiri obiọma gaa na saịtị ọrụ ha Ebe a.
Ihe ị ga -ede n'akwụkwọ ozi
Akụkụ kachasị mkpa na usoro a bụ ide akwụkwọ ozi mara mma. Ịchọrọ ime ka ụlọ ọrụ ahụ chee, "Chaị, nke a bụ ezigbo onye ahịa!" ma ọ bụ "Anyị nwere ike nweta mgbasa ozi dị ịtụnanya site na onye na -ede blọgụ a!" Ọ dị ka ihe siri ike, mana lee ụfọdụ echiche iji bido ide akwụkwọ ozi ma ọ bụ ozi na -ekwenye ekwenye.
Rịba ama: Ekwenyere m na m na -enye ụlọ ọrụ ekele. Naanị mgbe nke ahụ gasịrị ka m na -arịọ maka nlele efu. Usoro a na -arụ ọrụ nke ọma karịa ụzọ mkpesa (belụsọ na ịnweghị mkpesa ziri ezi na ihe akaebe nke ịzụta).
Ezigbo Sir/Madam ,: Ekele ekele na nkwanye ugwu na -arụ ọrụ kacha mma.
Okwu Mmalite: Kwuo na ị na-ede ka ị gwa ha ụdị ngwaahịa dị ukwuu ha nwere. Nye ọtụtụ ekele maka ụlọ ọrụ ha, site na ka ngwaahịa ha na-arụ ọrụ mgbe niile na akpụkpọ gị ruo ka ngwaahịa ha na-ebuga oge ọ bụla. Ọ bụrụ na ihe nchacha ha ma ọ bụ ndò anya bụ ọkacha mmasị gị, ugbu a bụ ohere gị ịgwa ha ihe ị chere. Ha ji echiche anyị (ndị na-azụ ahịa) kpọrọ ihe.
Ahụmahụ nkeonwe: Gụnye ahụmịhe ị nwere na ịchọ mma ha. Ọ nwere ike ịdị ka ntutu isi gị na -egbu maramara mgbe ị na -eji ncha ntutu ya ma ọ bụ ka ude akpụkpọ anụ ha si kpochapụ akpụkpọ ahụ kpọrọ nkụ n'aka gị. Nke a na -agbakwụnye ntụkwasị obi na ụdị onye ọzọ na leta ahụ.
Jụọ maka nlele: Ajụla Nke a anaghị arụ ọrụ. Kwuo na onye na-edozi isi gị tụrụ aro ụdị ncha ntutu ha ma ọ bụ na ịchọrọ "gbalịa tupu ịzụrụ" wee hụ nke kacha mma na gị.
Akpụkpọ anụ ma ọ bụ ụdị ntutu: Ụfọdụ ụlọ ọrụ ga -achọ ịma ụdị akpụkpọ ahụ gị/ọnọdụ gị ka ha mara ụdị nlele ha ga -eziga. Ọ bụrụ na ị nwere akpụkpọ ahụ nwere mmetụta dị nro, jide n'aka na ị ga -ekwu maka nke a.
Adreesị gị: Echefula ihe a!
Ekele: Kwuo ekele maka iwepụta oge gụọ leta gị nakwa na ị ga -enwe ekele dị ukwuu ma ọ bụrụ na ha zitere gị nlele. Kwuo na ị na -atụ anya nzaghachi ha.
Pụọ: “Nke gị kwesịrị ntụkwasị obi,” “Ezi ekele,” ma ọ bụ “Ekele kacha mma.
Mgbe ị matara ebe ị ga-ele anya, enwere ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya ebe ndị fashionistas maara nke ọma na mmefu ego nwere ike tinye ahịa na nnwere onwe site na ịpị naanị otu aka.
Yana saịtị ndị edepụtara na ntuziaka anyị, ịchọ Google dị mfe maka ' etemeete efu' ga-ewepụta saịtị zuru oke iji mee ka akpa etemeete gị na-agbawa na seams ogologo oge!
Jiri obiọma dobe okwu na ngalaba nkọwa n'okpuru ka ị kesaa echiche gị. Tinyegharịa na mgbasa ozi mmekọrịta gị.
Tags:ngwa etemeete efu, ihe nlele etemeete efu, igbe nlele etemeete efu, ihe nchoputa efu, mbupu n'efu, esi enweta etemeete n'efu na ụlọ ọrụ
Wyoming EBT Card Balance: Otu esi lelee EBT Card Balance gị
Ụlọ Akwụkwọ Iwu NYU: Otu esi akwụ ụgwọ ego mgbazinye ego na 2022
Otu esi elele nha nha kaadị EBT nke Iowa ngwa ngwa site na ebe ọ bụla